လွင့်ထွက်သွားသော နှင်းဆီပန်း - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ဇာတ်လမ်း – နောင်ရဲ
ညနေခင်းတစ်ခုဝယ် ဆူညံပွက်လောထနေသော ညကလပ်တစ်ခုတွင် နောင်ရဲတစ်ယောက် အေးဆေးစွာ ဝီစကီ အွန်ရော့ခ်ကို တစ်ငုံချင်း စုပ်နေသည်။ ညနေ ခပ်စောစောအချိန် ဖြစ်သောကြောင့်လည်း လူသိပ် မစည်လှသေး။ ဒုံးချပ်ချပ်တီးလုံးနှင့်အတူ နောင်ရဲဘေးနားတွင် ကနေသော ညပျိုဖြူများကိုလည်း စိတ်မဝင်စား၊ အရှေ့တွင် စကားပြောနေသော သူငယ်ချင်းများရဲ့ စကားဝိုင်းထဲလည်း ဝင်မပြောမိ။ နှုတ်ဆိတ်စွာ ဝီစကီကို အရသာခံ သောက်နေသည်။ ခေါင်းထဲတွင်မှာတော့ ရီဝေဝေ အတွေးများအောက်မှာ သူချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေး အကြောင်းသာ။
ဘာ့ကြောင့် နောင်ရဲ အရက်သောက်နေရသနည်း။ အဖြေမှာ မနက်ဖန်ညနေခင်းတွင် သူချစ်ရသော ကောင်မလေးနှင့် ညီအစ်ကိုပမာ ချစ်ရသော သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရဲရင့်သွေး တို့ မင်္ဂလာဆောင်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
အတွေးတွေက အတိတ်သို့ နောက်ပြန်လည်သွားသည်။ ဇာတ်လမ်းတွေထဲကလို အဖြူ၊ အမည်းလည်း မဟုတ်၊ ကာလာနဲ့လည်း မဟုတ်ပေ။ သူတို့ သုံးယောက်မှာ ငယ်ငယ်လေးထဲက အတူသွား၊ အတူလာ၊ အတူစား၊ အတူကစားခဲ့ကြသည့် ငယ်ပေါင်းတွေ ဖြစ်သည်။ ကြီးလာတော့လည်း တက္ကသိုလ်အသီးသီး ကွဲသွားပေမယ့် အဆက်အသွယ်မပြတ်။
နောင်ရဲက ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ကောင်မလေးက ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်၊ ရဲရင့်သွေးက နာမည်နှင့်လိုက်အောင်ပင် သတ္တိကောင်းလှစွာ စစ်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်သွားသည်။ သို့သော် မွေးနေ့တိုင်းတွင်တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆုံတတ်ကြသည်။ ရဲရင့်သွေးကတော့ နယ်ဘက်တွေ တာဝန်ကျနေလျှင် တယ်လီဖုန်းနှင့် မွေးနေ့ဆုတောင်းတတ်သည်။ ကောင်မလေးနှင့် ရဲရင့်သွေးက ကျောင်းအရင်ပြီးသောကြောင့် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အလုပ်တွေနှင့်ပေါ့။ နောင်ရဲ တစ်ယောက်သာ ကျောင်းမပြီးသေးသော ကျောင်းသားကြီး အဖြစ်နှင့်။ အားလုံးပေါင်း စာသင်နှစ် ၆ နှစ် ရှိသော ဆေးကျောင်းသားဘဝကို တခါတလေ မုန်းတီးတတ်လာသည်။ ဒါတွေထားပါလေ။
အဓိက အကြောင်းအရာကတော့ ရန်ကုန်တွင် ကျန်နေရစ်သော နောင်ရဲနှင့် ကောင်မလေးက အနေပိုနီးသည်ဟု ဆိုရမည်။ သူငယ်ချင်းအချစ်ကနေ ရင်ခုန်သံ ပေါင်းဖက်ကာ အရောင်ဆိုးဘို့ လွန်ခဲ့သောလ ကမှ နောင်ရဲ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရပြီးသောကြောင့်လည်း အားလပ်နေသော နောင်ရဲအတွက် ကောင်မလေးကို အချိန်ပိုပေးဖြစ်သည်။ သံယောဇဉ်ကို အခြေခံသောကြောင့်လည်း ကောင်မလေးဆီက အဖြေကို တစ်ပတ်အတွင်းပြန်ရခဲ့သည်။ နောင်ရဲတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်။ ရဲရင့်သွေးကိုလည်း သူ ခွင့်ရလို့ ရန်ကုန်ပြန်လာမှ ပြောရမည်ပေါ့။
ပျော်လို့မှ အားမရသေးခင် သတင်းဆိုးကြီးကြောင့် ၂ ယောက်သား တုန်လှုပ်စွာ ခြောက်ခြားခဲ့ကြသည်။ လောလောလတ်လတ်ကြီး ဖြစ်သောကြောင့် အဲ့ဒီနေ့ကို မှတ်မိသေးသည်။ နောင်ရဲအိမ်သို့ ရဲရင့်သွေး လာလည်သော အခိုက်ဖြစ်သည်။
“ဟေ့ရောင်… နောင်ရဲ…. ငါ… မင်းကို ပြောစရာရှိတယ်ကွ”
“ဟာ….. ငါလည်း ပြောမလို့ကွ… မင်းသတင်းက ဘာသတင်းလဲ…. သတင်းထူးလား”
“ငါ့အတွက်တော့ ထူးတာပေါ့ကွ….. ငါ အရင်ပြောမယ်ကွာ… မင်းနောက်မှ ပြော”
“အေးပါကွာ…. မင်းက အခုမှ အားလပ်တာဆိုတော့ မင်းကို ဦးစားပေးပါတယ်”
“ဒီလိုကွ… ငါ့အဖေနဲ့ အမေက ငါ့ကို ကြယ်စင်ခနဲ့ အိမ်ထောင်ချပေးမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်နေတယ်ကွ”
ဟင်….. ဒါ ကောင်မလေး နာမည်ပဲ……. သူများတွေ ခေါ်နေသော နာမည်၊ အဖေ အမေ ပေးထားသော နာမည်ကို မခေါ်ပဲ “ကောင်မလေး” ဟုသာ အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ခဲ့သော ကြယ်စင်ခ ဆိုသော ကောင်မလေး။ ထိတ်လန့်မှု၊ စိုးရိမ်မှုကို မျက်နှာတွင် မပေါ်အောင်သာ ထိန်းထားလိုက်သည်။
“ဟ…. မင်းကို အခုမှ ပြောတာလားကွ… ဒီလောက် အရေးကြီးတာကို မင်းကို ကြိုပြောထားသင့်တာပေါ့”
“အေးကွာ… ငါလည်း တာဝန်ကျရာ နယ်ဘက်မှာဆိုတော့ အိမ်က ငါ့ကို အသိမပေးပဲ စီစဥ်ကြတာတဲ့…. ငယ်ငယ်လေးထဲက သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုတော့လည်း ငြင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့”
“မင်းဘက်ကကော ဘယ်လိုလဲကွ….. ကောင်…. အဲ…. ကြယ်စင်ခကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲ”
“ဟဲဟဲ… ငါက အရင်ထဲက သူ့ကို ချစ်နေတာကွ…. အခု အိမ်ကစီစဉ်ပေးမယ် ဆိုတော့လည်း ငါဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာ..”
ရဲရင့်သွေး လက်မောင်းကို ခပ်ပါးပါးလေး ထိုးလိုက်သည်။
“အဲ့ဒါကို ကြယ်စင်ခကော သိပြီလား…”
“မပြောတတ်ဘူးကွ… ငါလည်း သတင်းကြားကြားချင်း မင်းဆီကို ထွက်လာတာ… အခု သူ့အိမ်သွားဘို့ မင်းလိုက်ခဲ့ကွာ…”
“ဒါဆို ခဏစောင့်ကွာ… ငါ အင်္ကျီလဲလိုက်ဦးမယ်….”
“နေဦး…. မင်းခုဏက ငါ့ပြောမယ်ဆိုတာ ဘာလဲကွ….”
“သြော်… အေး… ငါလည်း မေ့တော့မလို့… ငါ ကျောင်းပြီးပြီဆိုတော့ ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ မင်းအဒေါ်နဲ့ တိုင်ပင်မလို့ကွ..”
တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးသော အတွေးများပင်။ ရဲရင့်သွေးရဲ့ အဒေါ်က ဆေးပညာပါရဂူကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်သောကြောင့်၊ နောင်ရဲကိုလည်း စာသင်ပေးဖူးသောကြောင့်ပင်။
“ဘာများလဲလို့ကွာ… မင်းအားတဲ့အချိန်ပြော…. ငါ့အဒါ်အားတာနဲ့ မင်းကို သူ့ဆီခေါ်သွားမယ်…. ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့… မင်းနဲ့ ခင်နေတာပဲကို…”
“အေးပါကွာ…. သူ့တူ ပါလာတော့ ငါပြောအား ပိုရှိသွားတာပေါ့ကွ….”
“အေးပါ… မြန်မြန်… ကြယ်စင်ခ စောင့်နေတော့မယ်…. ငါ မင်းဆီကို မလာခင် ဖုန်းကြိုဆက်ထားတာကွ… မင်းကိုပါ ခေါ်လာမယ့်အကြောင်း”
“မင်းကလည်း မယူရသေးဘူး…. ကြောက်နေပြီ… ဟားဟား…”
“မကြောက်ပါဘူးကွာ… ချစ်တာ… ဟားဟားဟား…”
ကောင်မလေးအိမ်ကို ရောက်တော့ ခြံထဲက ဒန်းလေးပေါ်တွင် ထိုင်ကာ သူတို့ကို စောင်နေသော အဖြူရောင်ဝမ်းဆက် ဂါဝန်ကားကားကြီးကို ဝတ်ထားသော ဆံပင်ရှည်ရှည် ကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရင်ထဲ နင့်နေတာပဲ ကောင်မလေးရယ်။ ကောင်မလေး မျက်ဝန်းတွေကလည်း မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေသည်။ ခုဏကမှ တရေးအိပ်ပြီးကာစမို့လို့ ဆိုသော စကားမှာလည်း ရဲရင့်သွေးကို ပြောသလိုနှင့် နောင်ရဲကို ပြောမှန်းသိသည်။
“ကဲ… မင်းတို့ ၂ ယောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောကြ… ငါ ကြီးကြီးကို သွားနှုတ်ဆက်လိုက်ဦးမယ်”
ဟုဆိုကာ ကောင်မလေး အမေကို နှုတ်ဆက်ရန် အိမ်ထဲသို့ ဝင်သွားလိုက်သည်။ ကောင်မလေး အမေနှင့်ကလည်း အတွင်းအစင်း အကုန်သိသောကြောင့် ဆွေမျိုးသားချင်းလိုပင်။ ဘာ့ကြောင့် သူ့ကိုမှ သားမက်အဖြစ် မရွေးတာလဲ နောင်ရဲ သိချင်သည်။ သို့သော်လည်း မမေးဖြစ်ပေ။ ဟိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်း၊ မိသားစုရေးရာ အကြောင်းတို့နှင့်ပင် စကားဝိုင်းကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။
သို့သော် နောင်ရဲကို အားနာနေဟန်၊ သနားလေဟန်နှင့် စကားပြောနေသည်ဟု ထင်သည်။ ၁၀ မိနစ်လောက် အကြာမှာပင် ကောင်မလေးတို့ အိမ်ထဲဝင်လာကြသည်။ ရဲရင့်သွေး မျက်နှာကတော့ ပြုံးဖြီးဖြီးပေါ့။ သူများတွေ မမြင်နိုင်အောင် လက်မထောင်ပြသည်။ သွားပြီပေါ့ကွာ… ဒါဆို ကောင်မလေးက သူ့ကို လက်ခံလိုက်သည့် သဘောပင်။ အပြောင်းအလဲမြန်လိုက်တာ ကောင်မလေးရယ်။
ညစာကို ကောင်မလေးတို့နှင့် အတူစားကာ အိမ်ပြန်လာကြသည်။ အပြန်နှုတ်ဆက်တော့ ရဲရင့်သွေး မမြင်အောင် ဖုန်းဆက်မည်ဟု လက်နှင့် ပြသွားသည်။ ဘယ်လိုငြင်းချက် ထုတ်ချင်တာလဲ…. ဘယ်လို ဖြေရှင်းဦးမှာလဲ…. လုပ်ပေါ့ကွာ…. မင်းကို ချစ်တော့လည်း မင်းလုပ်သမျှ ကျေနပ်နေရမှာပေါ့။
“ဟယ်လို… နောင်ရဲ…. မအိပ်သေးဘူးလား…”
“နင် ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုလို့ စောင့်နေတာလေ….”
“ငါ နင့်ကို ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးဟာ…”
“နောင်ရဲရယ်… နင် ငါ့ကို မရွဲ့ပါနဲ့…. ငါ နင့်ကို တကယ်ချစ်တာပါ…”
“ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့ ရဲရင့်သွေးနဲ့ ယူဘို့ သဘောတူရတာလဲ…. ရှင်းပါဦး… မမရယ်”
“နင်.. ငါတို့ အိမ်အကြောင်းလည်း သိသားနဲ့… သမီးတစ်ယောက်နဲ့ ဘာမှ မလုပ်တတ်တဲ့ အမေမုဆိုးမကြီးကို ရဲရင့်သွေးတို့ မိသားစုက စောင့်ရှောက်လာတာလေဟာ…. အခု သူ့ အမေက ငါနဲ့ သူ့သားကို အိမ်ထောင်ချပေးချင်တယ်ဆိုပြီး လာပြောတော့ ငါ့အမေက ဘာပြန်ပြောရမှာလဲ… နင်နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ငါ့အမေ သိပါတယ်ဟာ… ဒီနေ့ နင်တို့ ပြန်သွားတော့လည်း နင့်အကြောင်း ပြောရှာတယ်…. သူလည်း နင့်ကို သနားပေမယ့်… တစ်ဘက်ကို မလွန်ဆန်ရဲလို့ပါတဲ့…. ငါလည်း ပထမတုန်းက ငါ့အမေကို ငြင်းပါသေးတယ်…. ဒါပေမယ့် အမေ့မျက်ဝန်းကကျတဲ့ မျက်ရည်ကို ငါမလွန်ဆန်ရဲဘူးဟာ…. အဲ့ဒါကြောင့် ငါ လက်ခံလိုက်ရတာပါ…”
“နင် ငါ့ကို ဘာ့ကြောင့် ကြိုမပြောတာလဲ ကောင်မလေးရယ်….”
“ငါလည်း တနေ့ကမှ သိတာ…. ငါ့စိတ်တွေလည်း ရှုပ်ထွေးနေလို့ မပြောဖြစ်တာပါဟာ…. ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟာ…”
“ငါ… နင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီးသား…. ကောင်မလေး…. ဒါပေမယ့် ဆက်ချစ်ခွင့်တော့ပေး… ငါ… နင့်ကို တအားချစ်တာ…”
သို့နှင့် တစ်ပတ်အတွင်း မင်္ဂလာဆောင်ရန် စီစဉ်ရတော့လည်း ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သော နောင်ရဲကပင် အစစအရာရာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရသည်။ အချိန်မလင့်စေရန်အတွက်လည်း ရဲရင့်သွေး အိမ်မှာပင် အိပ်လိုက်သည်။ အားလုံး ပြီးစီးသလောက် ဖြစ်တော့မှ မနက်ဖန် မင်္ဂလာပွဲ အစီအစဉ်များကို ပွဲစီစဉ်သူက ကြိုပြောနေသည်ကို နားထောင်နေသော ကောင်မလေးနှင့် ရဲရင့်သွေးကို နှုတ်ဆက်ကာ သူသွားနေကြဖြစ်သော ညကလပ်သို့ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟန်ဆောင်စွာ နေနိုင်ခဲ့သော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ပြုဘို့ပေါ့။
ထိုစဉ် ပုခုံးကို အားပါပါ ဆွဲလှုပ်လိုက်သော လက်တစ်စုံကြောင့် အတွေးကမ္ဘာထဲကနေ လက်ရှိ အရက်ဝိုင်းလေးထဲသို့ ပြန်ရောက်လာသည်။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူအရမ်းချစ်ရသော ကောင်မလေးပင် ဖြစ်သည်။
“နောင်ရဲ… နင်ဘာလို့ အရက်တွေ သောက်နေတာလဲ…”
“နင်ကကော ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီကိုလိုက်လာတာလဲ…”
“ငါ နင့်ကို စိတ်မချလို့ပေါ့ဟ…. ရဲရင့်သွေး အိမ်ကနေ ငါပြန်လာတော့ နင့်အိမ်ဖုန်းဆက်တာ ပြန်မလာသေးဘူးတဲ့… အဲ့ဒါနဲ့ နင်ရှိတတ်မယ့် နေရာတွေ ငါလိုက်ရှာတာ.. နောင်ရဲ… ငါ အခု ရဲရင့်သွေးကို ရွေးချယ်လိုက်ပေမယ့် …. ငါ နင့်ကိုချစ်တယ်… ဒီစကားက မပြောသင့်ပေမယ့် နင့်ကို ငါ တအားချစ်တယ်… ငယ်ငယ်လေးထဲက အားငယ်တတ်တဲ့ ငါ့ကို၊ ငယ်ငယ်လေးထဲက တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတဲ့ ငါ့ကို၊ သူငယ်ချင်းလို တစ်မျိုး၊ အစ်ကိုလို တစ်ဖုံ၊ ပြုစုခဲ့တဲ့ ယုယခဲ့တဲ့ နင့်ကို အချစ်ဆုံး.. ငါ စိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ နင်နေပါဟာ… ငါစိတ်ချရအောင်တော့ နင်နေပါ….”
“၇ နာရီ ထိုးပြီဟ….”
ဒေါင်ချာဆိုင်းနေသော ခေါင်းက မစဉ်းစားပဲ စကားတစ်ခွန်း လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားသည်။
“နင် ငါ့ကို အဲ့လောက်ချစ်ရင် ငါနဲ့ အခုဟိုတယ် လိုက်မလား…”
မမျှော်လင့်ထားသော စကားဖြစ်သောကြောင့် ကောင်မလေး မှင်သက်နေသည်။ အတန်ကြာတော့မှ နောင်ရဲလက်ကို ကောက်ဆွဲကာ အပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်သွားသည်။ ဘော်ဒါတွေကိုလည်း မနှုတ်ဆက်ဖြစ်တော့။ ကောင်မလေးက တက္ကစီဖြင့် သူ့ဆီ လိုက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလပ်ထဲက ထွက်တော့ ကားသော့ကို နောင်ရဲ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲက နှိုက်ယူပြီး ကိုယ်တိုင် မောင်းတော့သည်။ ပြောလိုက်သော စကားအတွက် မှန်လား မှားလား ပတ်ချာရိုက်နေကာ ကောင်မလေး ခေါ်ရာနောက်သို့ လိုက်ပါသွားသည်။
သတိထားမိချိန်မှာ ဟိုတယ်အခန်းထဲသို့ပင် ရောက်နေပြီ။ ကောင်မလေးကပင် စကာ နောင်ရဲ နှုတ်ခမ်းကို ရေငတ်နေသူပမာ အငမ်းမရ နမ်းစုပ် တော့သည်။ နူးညံ့လိုက်တာဗျာ….. ဖူးငုံငုံ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကနေ ချိုမြမြ အရသာက တသက်မမေ့စရာပင်။ နှုတ်ခမ်း စုပ်နမ်းနေရင်းမှပင် နောင်ရဲရဲ့ အင်္ကျီကို ချွတ်နေတော့သည်။
နောင်ရဲရဲ့ လက်နှစ်ဘက်ကလည်း အလိုက်သင့်ပင် ကောင်မလေးရဲ့ တင်ပါးကို ပွတ်ရာမှတဆင့် စကပ်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ အပြန်အလှန် နမ်းနေရင်းပင် အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ချလိုက်ကြသည်။ အကုန်ကျွတ်ကျသွားတော့မှ ကောင်မလေးက ကုတင်ပေါ် အပြေးခုန်တက်ကာ စောင်ခြုံနေသည်။
“ရှက်လို့ပေါ့ဟာ….. ငါတို့ ဘယ်တုန်းက အခုလို နေဖူးလို့လဲ….”
နောင်ရဲလည်း ကုတင်ပေါ်သို့ လိုက်သွားကာ ကောင်မလေး ခြုံနေသော စောင်ကို အသာမကာ ကောင်မလေးရဲ့ ညာဘက်ဘေးနား ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး ကောင်မလေးကို ဖက်လိုက်သည်။ ဖက်လိုက်တာနှင့် တပြိုင်ထဲ ကောင်မလေးက ခေါင်းအုံပေါ်သို့ လှဲချလိုက်သည်။
ဖက်ရက်သားလေး အလိုက်သင့် လှဲချပြီးတော့မှ ခုဏက စတင်နမ်းစုပ်ထားသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုပ်တော့သည်။ ညာဘက်လက်ကလည်း အလိုလို ကောင်မလေးရဲ့ ညီမလေးကို ပွတ်ပေးနေလိုက်သည်။ အမွှေးတွေက နူးညံ့စွာဖြင့် ကိုင်လို့ကောင်းသည်။ အပေါက်ဝနေရာကို ရောက်တော့ စိုစိစိုစိ ဖြစ်နေတာကို နောင်ရဲ သတိထားမိလိုက်သည်။ နမ်းနေရာကနေ လှိုက်မောနေသော အသံနှင့်။
“နောင်ရဲ… ငါ့ကို မြန်မြန်လုပ်တော့ဟာ…”
နောင်ရဲလည်း အသာထကာ လှဲနေသော ကောင်မလေးကို ပေါင်ကားခိုင်းပြီး ဒူးထောင်ခိုင်းလိုက်ကာ ညီလေးကို အပေါက်ဝဆီသို့ ထိုးထည့်တော့သည်။ အပေါက်က တအားကျဉ်းနေသောကြောင့် လွယ်လွယ်နှင့် မဝင်ပေ။
အတင်းထိုးထည့်သော အခါမှာတော့ အပေါက်ချော်ကာ အပေါ်သို့ ချော်ထွက်လေသည်။ ကောင်မလေးကို ကြည့်တော့ သူလုပ်တာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတာကို တွေ့ရသည်။ သို့နှင့် အားပြန်သွင်းကာ ညီတော်မောင်ကို လက်နှင့်ထိန်းပြီး အားနှင့်ဖိချလိုက်သည်။ ဝင်သွားလေပြီ။ အဆုံးထိတော့ မဟုတ်။ ကောင်မလေးဆီက အံကြိတ်ကာ
ဟု အော်သံ ကြားလိုက်ရသည်။ ခဏလေး အသာငြိမ်ကာ အသာလေး နည်းနည်းပြန်ထုတ်ပြီး ပြန်သွင်းလိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ အဆုံးထိ ဝင်သွားလေပြီ။
အတွင်းထဲမှာ ခဏလေးစိမ်နေစဉ်အတွင်း ညီမလေးက ဆွဲဆွဲညှစ်လေတော့သည်။ မထိန်းနိုင်တော့။ ဘယ်လိုမှပင် ထိန်းချုပ်လို့မရအောင် ဖြူပျစ်ပျစ် အရည်တွေက ညီမလေးထဲကို ပန်းထွက်တော့သည်။
“နောင်ရဲ… နင်တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူးလား…”
“အင်း… နင်က ပထမဆုံးပဲ……”
“ကြည့်တာနဲ့ သိပါတယ်အေ….. နင်လည်း ငါ့ရဲ့ ပထမဆုံးပါ…”
“ငါလည်း ကြည့်တာနဲ့ သိပါတယ်ဟ….”
ညီမလေးထဲမှ ထုတ်လိုက်သော ညီတော်မောင်မှာ သွေးအပြည့် ပေနေသည်ကို ပြလိုက်သည်။ ကောင်မလေး မျက်နှာတစ်ချက် ပျက်သွားပေမယ့် ချက်ချင်း မျက်နှာပြင်ကာ ပြုံးရယ်ရင်း…
“နင်ကျေနပ်တော့နော်…. နင့်ကို ငါ ချစ်တယ်ဆိုတာလည်း ယုံနော်…. နောက် ငါနဲ့ မယူရလို့ဆိုပြီးလည်း အရက်တွေ မသောက်နဲ့… မမိုက်နဲ့ဟာ.. နော်….”
“အင်းပါ…. နင်နဲ့ တသက်မပေါင်းရပေမယ့် နင့်အနားမှာ တသက်လုံး ရှိနေခွင့်တော့ပေးဟာ…. နော်…”
“အင်း… နောင်ရဲ…… ငါ အိမ်ပြန်တော့မယ် ၈ နာရီတောင် ထိုးတော့မယ်ဆိုတော့….”
“ကျေးဇူးပါ.. မောင်… ငါ့တသက်မှာ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ ငါ့စိတ်ကူးထဲက နာမ်စားအသုံးအနှုန်းပါ… နင့်တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ခေါ်ခဲ့မယ်…. ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူမှ မပြောရဘူးနော်… ကတိပေးဟာ”
ထို့နောက် ကောင်မလေးကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ကာ ရဲရင့်သွေး အိမ်သို့ပြန်လာသည်။
“မင်းကွာ… ကြာလိုက်တာ… ဘယ်သွားနေတာလဲ….”
“ဟဲဟဲ… မသောက်ရတာ ကြာလို့ သွားသောက်တာကွ…. မင်းကိုတော့ မနက်ဖန်မှ နှိပ်စက်တော့မယ်….”
“ဟားဟား…. မင်းကတော့ နည်းနည်းလေးတောင် မစောင့်နိုင်ဘူး… အေးပါ… အေးပါ… မနက်ဖန် မင်းသဘောရှိ စားသောက်ပေါ့…. ညဘက် တခြားသူတွေ မပါပဲ ငါတို့ သုံးယောက်ထဲ ဝိုင်းဖွဲ့ကြတာပေါ့…”
“အေးပါ… နောက်တော့မှ ငါ့ကို အစောကြီး ပြန်လွှတ်မနေနဲ့ဦး….”
နောက်တစ်နေ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကောင်မလေးက တော်တော်လေး လှပါသည်။ ရဲရင့်သွေးနှင့်လည်း လိုက်ဖက်သည်ဟု ထင်သည်။ မနေ့က ကိစ္စအတွက် ကောင်မလေးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာ ဖိန်းတိန့်တိန့်ဖြစ်နေပေမယ့် ကြာတော့လည်း အဆင်ပြေသွားပါသည်။ ကောင်မလေး လမ်းလျှောက်တာ မသိမသာလေး ကွတတဖြစ်နေသလို။ ရဲရင့်သွေးကတော့ ပြောသွားသည်။
“ကြယ်စင်ခတစ်ယောက်တော့ကွာ…. အခုတလော ဝလာလို့တဲ့… ပြီးတော့ မနေ့က တစ်ညလုံး လမ်းလျှောက်ကျင့်နေရင်းနဲ့ ပေါင်ရှလာတယ်တဲ့ဟေ”
“ဟားဟား… ဖြစ်ရလေ…. ညကျတော့မှ ပေါင်ရှတာကို ဥုံဖွ လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ကွာ…”
နောင်ရဲကို ထိုးလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး မျက်စောင်းတွေက မသိမသာဖြစ်ပေမယ့် စူးရှသည်။ ရင်ဘတ်ကို နင့်ကနဲပဲ။
အချိန်ကြာသောအခါ ယောကျ်ားလေး မွေးသည်။ တိုက်ဆိုင်တာပဲလား။ တမင် ရည်ရွယ်တာပဲလားတော့ မသိ။ ကလေး နာမည်က မေးကြည့်တော့ ကောင်မလေးကိုယ်တိုင် မှည့်ထားတာ “ရဲရင့်နောင်” တဲ့။ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း နာမည်လည်း ပါစေချင်သောကြောင့်ဟု သိရသည်။
အခု နောင်ရဲလား။ ကလေးထိန်းနေသည်။ သွေးနီးလား ဝေးလား မသိသော ဒူးမနာသားလေးကိုပေါ့။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 14,682
← မရီးကို ဝင်လိုးခဲ့တယ်